Vagari VemuBindura Vanochema neZINWA Panyaya Yemitero Yemvura
Vagari vemuBindura vanoti vari kurwadzikana zvikuru nemakwiriro akaita mari dzemitero yemvura mumagwaro avakatambira kubva kuZINWA.
Sangano rinomirira vagari ava, reBindura Residents Association, rinoti riri kukurudzira vagari ava kuti vasabhadhare mitero yemvura iyi kusvikira ZINWA yagadzirisa nyaya iyi.
Asi mumwe mushandi weZINWA ataura neStudio7 asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau, ati ZINWA yakakwidza mitero yemvura kubva muna Nyamavhuvhu, asi haina kuzivisa vagari vemumaguta sezvaisimboitwa kare.
Mushandi uyu ati chimwe chikonzero chiri kuita kuti mari dzemitero yemvura ikwire zvikuru, ndechekuti mishonga inoshandiswa pakuchenesa mvura yakakwira mitengo zvakanyanyisa zvichitevera kubvumidzwa kwekukwidzwa kwemitengo yezvinhu.
Atiwo dzimwe mita dzemvura hadzisi kushanda uye ivo vagari havasi kuzivisa zvose izvi kuZINWA, izvo zvinozoita kuti vashandi vekambani iyi vaite zvekufungidzira pakutara mari dzemiripo.
Mutauriri weBindura Residents Association, VaTinashe Madamombe, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio7 kuti havasi kuramba kubhadhara mitero yemvura chete asi kuti vari kupikisa kutorwa kwemabasa ekufambiswa kwemvura netsvina neZINWA.